Ama-Amazon Associates: Ngabe ukhona owenza imali? | Martech Zone
NgoMgqibelo, Disemba 23, 2006 NgoMgqibelo, Okthoba 20, 2018 Douglas Karr
Kumele ngibe neqiniso… ngiyakuthanda ukuba ne- my eshalofini kubhulogi lami futhi ngiyathanda ukuxoxa ngezincwadi engizifunda namanye ama-blogger. Angicabangi ukuthi ngake ngenza i-dime kuma-Amazon Associates, noma kunjalo. Kungenza ngizibuze ukuthi ngabe i-akhawunti yami ehlangene iphuliwe noma abantu abamane nje bathenge izincwadi kumawebhusayithi.
Iphuzu lami lesibili lokuthembeka: Angivamile ukuthenga e-Amazon. Ngithanda amaBorder neCafe yabo kanye neyabo imivuzo Uhlelo. Ngine-akhawunti ye-Inthanethi neT-Mobile ukuze ngikwazi ngisho nokuchitha isikhathi esengeziwe lapho. (Kuyadabukisa, huh?) Luphi uhlelo lokudlulisela noma lokuhambisana neBorder?
Namuhla, ngivuselele ishelufu lami lezincwadi. Nakhu ukufundwa kwami ​​kwamanje:
Ngazise uma uqhafaza bese uthenga noma iyiphi yalezi zincwadi. Futhi, ngingathanda ingxoxo yakho yalezi zincwadi - noma izincomo zabanye. Ngiyakuthanda ukufunda… mhlawumbe lokhu kuyinto efanayo phakathi kwama-blogger. Futhi, ngazise uma ngabe wenza imali nabakwa-Amazon Associates.
Tags: ababhali bezentengisoizincwadi zokumakethaukumaketha kuyafundwaizincwadi zokuthengisaukuthengisa kufundwa
Ingabe Isayithi Lakho, Ibhulogi, noma Okuphakelayo Kukhishwe?
Feb 23, 2007 ngo-4: 09 PM
Ngenze cishe ama- $ 23 ngaphezulu kweminyaka engu-2.5. Iningi lalokho selize nezinyanga ezi-3 noma ezi-4 ezedlule.
Ngo-Apr 13, i-2008 ku-9: i-53 PM
Angikenzi lutho, ukuphela kwendlela ozoyibhanga ngayo ”kubangane be-amazon uma unamathani abantu abavakashela isiza sakho. Kungcono ukuthola izincwadi ezithile ezingavamile futhi uzifake ku-ebay
Jan 1, 2009 ngo-7: 12 PM
Bengilokhu ngibhala izinto kwamanye amawebhusayithi wami kanye namabhulogi isikhathi esingaphezu kweminyaka engu-2 futhi angikafiki esigabeni sokukhokha.
Ngingathanda impela ukuzwa kumuntu empeleni owenza imali njengenhlangano ephethwe yi-amazon.
Jan 1, 2009 ngo-7: 16 PM
Sikufisela inhlanhla ngalokho! Angikakabi nayo. 🙂
Ngo-Apr 7, i-2009 ku-11: 49 AM
Ngiyajabula ukuthola ukuthi akumina ngedwa ongenzi lutho e-Amazon Ngibe nesitolo futhi ngazama konke engake ngakwenza kwakuyi- £ 0.33p ngemuva kwezinyanga eziyi-18 ucabanga ukuthi kufanele ngiyeke futhi wenze okuthile okuwusizo njengokufunda isiFulentshi.
Jun 6, 2009 ku-8: 38 PM
Ngine-blog yami iminyaka futhi angikaze ngenze nesenti ngama-Amazon Associates. Ngenza imali ngeGoogle Adsense futhi angenzi lutho! Ama-Amazon Associates awumsebenzi omningi kakhulu.
Dec 31, 2010 ku-4: 42 AM
UDoug, kule nyanga ngithumele ukuchofoza okungu-16,727 kwimikhiqizo ehlukile e-Amazon, futhi ngenze imali engama- $ 23.00 - ngishaqekile ngakho.
Dec 31, 2010 ku-7: 53 AM
Lokho kufana kakhulu nesipiliyoni sami, uBrandon. Angiqiniseki ngempela ukuthi ngabe yephukile yini noma nje iyinkinga yamaphesenti ahambisanayo kakhulu, kepha isikhathi sami sisetshenziswe kahle kakhulu ngifuna imali kwenye indawo!
Dec 31, 2010 ngo-4: 42 PM
Kusukela kokuthunyelwe kwami ​​kokugcina (amahora angu-11 edlule) ukuchofoza kwami ​​manje sekuku-17,368 - futhi ngithole ukuthengiswa okusha. Ngicabanga ukuthi ukhiye ukukhuthaza izinto ezinkulu zamathikithi. Awukwazi nje ukuthengisa izincwadi ezanele ukuze uzuze. Kepha thengisa ama-MacBooks ambalwa, noma okuqukethwe kwedijithali (njengama-movie) okunenkokhelo ephezulu kakhulu - futhi kungenzeka ukuthi wenza okungenani u- $ 75 kuya ku- $ 100 ngenyanga, uqinisekile ukuthi ngeke uphile ngakho kodwa ungakhokhela izindleko zikabhiya zanyanga zonke.
Jul 29, 2012 ku-4: 07 AM
Abalingani beAmazon udoti. Uma bekhokhe ngokuchofoza ngakunye bangahle bakufanele (kuya ngenani lokuchofoza) kepha bezama ukuthola umuntu ukuthi athenge okuthile angakakubheki kuwebhu? Yebo kulungile! Akekho umuntu engimaziyo owenze idili kulokhu - ungachithi isikhathi sakho. Iya nge-adsense, noma i-buysellads. Noma ngubani omunye umuntu (ngaphandle kokuthi ungangena emithonjeni yezindaba zesizwe) akasifanele isikhathi sakho.